“လူ တဈယောကျ ကံကောငျးခငျြလာပွီ ဆိုရငျ ဒီလိုလေးတှဖွေဈလာမယျ. . . .” – Nyi Ma Lay
“လူ တဈယောကျ ကံကောငျးခငျြလာပွီ ဆိုရငျ ဒီလိုလေးတှဖွေဈလာမယျ. . . .”
လူတဈယော ကျသညျ ကံကောငျး ခငျြလာပွီဆိုလွှငျ စိတျတညျ ငွိမျလာခွငျး၊ စိတျရှုပျထှေးမှု ကငျးကာ စိတျမြားကွညျလ ငျလနျးဆနျးလာခွငျးစသော လက်ခဏာမြား ဖွဈပျေါလာလရှေိ့ပါသညျ …။၎င်းငျးစိတျကို ယဘေုယအွားဖွငျ့ ကောငျးစိတျဟု သတျမှတျနိုငျပါသညျ …။
ထိုစိတျမွိုး ဝငျလာလွှငျ ‘ငါတော့ ကံကောငျးတော့မယျ၊ ဒီစိတျဟာ ကောငျး ကံပွုလုပျဖွဈဖို့ အကွောငျးခံစိတျပပေဲ’ ဟု သဘောထားကာ ထို စိတျ ကို ပြောကျပွကျမသှားရအောငျ ထိနျးထားပွီး ကောငျးမှုတဈခုခုကိုပွုလုပျဖွဈအောငျသာ ကွိုးစားလုပျဆောငျယူရမညျ ဖွဈသညျ …။
ထို့အပွငျ အမြားဆုံး ပွုလုပျဖွဈလေ့ ရှိသညျ့ လကေ့ငျြ့နစေရာ အထူး မလိုသော သမားရိုးကွ မကောငျးကံဘကျသို့ ပွနျပွောငျး
နောကျကွောငျးပွနျမလှညျ့မိစရေနျလညျး အထူးသတိထားရနျ လိုအပျပါသညျ။
လှူခငျြတနျးခငျြစိတျပေါကျလာလွှငျ ‘ငါ ကံကောငျးလာပွီ၊ ဒီကံလေး အထမွောကျအောငျ ငါ လှူပေးဦးမှ’၊ သီလဆောကျတညျခငျြစိတျ ပေါကျ လာလွှငျ ‘ငါ ကံကောငျး လာပွီ၊ သီလလေး ဆောကျတညျပွီး နဦေးမှ’၊
ဘုရားရှိခိုးခငျြစိတျ ပေါကျလာလွှငျ ‘ငါ ကံကောငျးလာပွီ၊ ဘုရားရှိခိုးပွီးတော့ ပူဇျောလိုကျဦးမှ’၊ ဘာဝနာကမ်မဋ်ဌာနျး ပှါးမြားခငျြစိတျ၊ တရား
အားထုတျခငျြစိတျ ပေါကျလာလွှငျ ‘ငါ ကံကောငျးလာပွီ၊ ပှါးမြားဖွဈအောငျ ပှါးမြားလိုကျဦးမှ၊အားထုတျဖွဈအောငျ အားထုတျလိုကျဦးမှ’ စသညျဖွငျ့ ကောငျးကံ
မြားအထမွောကျအောငျမွငျစရေနျ ကွိုးစားလုပျဆောငျရမညျ ဖွဈ သညျ။ ကောငျးစိတျမြားပျေါလာပွီး ကောငျးကံမြားကိုပွုလုပျ အားထုတျဖွဈ လွှငျ အခှငျ့အရေးကောငျး၊ အခွအေနကေောငျးမြား ရလာပွီဟု မှတျယူရ မညျဖွဈ
ပွီး ၎င်းငျးအခှငျ့ကောငျး၊ အခွအေနကေောငျးမြားကို လကျမလှတျစေ ရနျ လှနျစှာ အရေးကွီးပါသညျ …။ဓမ်မမိတျဆှေ သူတျောစငျအပေါငျး
ကနျြးမာရှငျလနျး ငွိမျးအေးနိုငျကွ ပါစေ ~~ နှလုံးသား၏ ဓမ်မသံစဉျ
လူတစ်ယော က်သည် ကံကောင်း ချင်လာပြီဆိုလြှင် စိတ်တည် ငြိမ်လာခြင်း၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှု ကင်းကာ စိတ်ျမားကြည်လ င်လန်းဆန်းလာခြင်းစသော လက္ခဏျာမား ဖြစ်ပေါ်လာလေ့ရွိပါသည် …။၎င်းစိတ်ကို ယေဘုယအြားဖြင့် ကောင်းစိတ်ဟု သတ်မွတ်နိုင်ပါသည် …။
ထိုစိတ်မြိုး ဝင်လာလြှင် ‘ငါတော့ ကံကောင်းတော့မယ်၊ ဒီစိတ်ဟာ ကောင်း ကံပြုလုပ်ဖြစ်ဖို့ အေကြာင်းခံစိတ်ပေပဲ’ ဟု သေဘာထားကာ ထို စိတ် ကိုျေပာက်ပက်ြမသွားရေအာင် ထိန်းထားပြီး ကောင်းမှုတစ်ခုခုကိုပြုလုပ်ဖြစ်အောင်သာ ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ယူရမည် ဖြစ်သည် …။
ထို့အပြင် အျမားဆုံး ပြုလုပ်ဖြစ်လေ့ ရွိသည့် လေ့ကျင့်နေစရာ အထူး မလိုသော သမားရိုးကြ မေကာင်းကံဘက်သို့ ပြန်ပြောင်း
နောက်ကြောင်းပြန်မလွည့်မိစေရန်လည်း အထူးသတိထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
လှူချင်တန်းချင်စိတ်ပေါက်လာလြှင် ‘ငါ ကံကောင်းလာပြီ၊ ဒီကံလေး အထေမြာက်အောင် ငါ လှူပေးဦးမွ’၊ သီလေဆာက်တည်ချင်စိတ် ပေါက် လာလြှင် ‘ငါ ကံကောင်း လာပြီ၊ သီလေလး ဆောက်တည်ပြီး နေဦးမွ’၊
ဘုရားရွိခိုးချင်စိတ် ပေါက်လာလြှင် ‘ငါ ကံကောင်းလာပြီ၊ ဘုရားရွိခိုးပြီးတော့ ပူဇော်လိုက်ဦးမွ’၊ ဘာဝနာကမ္မဋ္ဌာန်း ပွါျးမားချင်စိတ်၊ တရား
အားထုတ်ချင်စိတ် ပေါက်လာလြှင် ‘ငါ ကံကောင်းလာပြီ၊ ပွါျးမားဖြစ်အောင် ပွါျးမားလိုက်ဦးမွ၊အားထုတ်ဖြစ်အောင် အားထုတ်လိုက်ဦးမွ’ စသည်ဖြင့် ကောင်းကံ
ျမားအထေမြာက်အောင်မြင်စေရန် ကြိုးစားလုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ် သည်။ ကောင်းစိတ်ျမားပေါ်လာပြီး ကောင်းကျံမားကိုပြုလုပ် အားထုတ်ဖြစ် လြှင် အခွင့်အေရးကောင်း၊ အခြေအနေကောင်ျးမား ရလာပြီဟု မွတ်ယူရ မည်ဖြစ်
ပြီး ၎င်းအခွင့်ကောင်း၊ အခြေအနေကောင်ျးမားကို လက်မလွတ်စေ ရန် လွန်စွာ အေရးကြီးပါသည် …။ဓမ္မမိတ်ဆွေ သူတော်စင်အေပါင်း
ကျန်းမာရွင်လန်း ငြိမ်းအေးနိုင်ကြ ပါစေ ~~ နွလုံးသား၏ ဓမ္မသံစဉ်
Previous post သမေိနျ့ ကခြံရသူတှေ နောကျဆုံးအနနေဲ့ တောငျးဆိုခဲ့တဲ့ ထူးထူးဆနျးဆနျး အစားအစာမြား
Next post ကြှနျတျော …. ‘ဝကျသား စားတာ စောခဲ့တယျ’